Sina: Tantaran’ny “Visa” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2010 22:42 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, македонски, English
Hatraiza fotsiny ny hasarotr'izany, hoy i Chen Zikun mpitoraka blaogy ao amin'ny Sina sady mpanao gazety mahaleo tena ao amin'ny lahatsorany tamin'ny 6 Aogositra, ho an'ireo mpitety tany Sinoa te-haka “visa”—ka ny valitenin'i Chen dia toa manao hoe: tsy dia sarotra loatra—ka izaràny ireo tantara momba ny “visa” ho an'ireo firenena maro efa nalehany:
Talohan'ny nangatahako “visa” tamin'ny diako voalohany indrindra ivelan'ny firenena, falifaly foana aho nieritreritra fa, avy amina firenena manana toe-karena mora mivoatra, ary indrindra noho ny fomba hitateran'ireo haino aman-jery toy ny CCTV momba ny fitazonan'ireo mpizahatany Sinoa ny laharana voalohany hatrany amin'ny taham-pahasahiana mividy entana lafo vidy. Tsy mbola faly toy izany aho. Efa nianatra niteny Tsia i Sina, sady tsy hisy firenena tsy hiarahaba ahy am-pitsikiana, no hanome ahy “visa” mora foana.
Avy eo nefa, hay ny mifanohitra amin'izany no marina…..
Tamin'ny faran'ny fararano tamin'ny 2003, ny “visa” fizahan-tany vahiny voalohany nalaiko dia ho an'ny firenena Schengen iray, Autriche. Nitaky fanamarinana fananana trano, fanamarinana fananana fiara, porofom-bola any amin'ny banky mihoatra ny 50 000 RMB, taratasy fanamarinana avy amin'ny toeram-piasàko, ka ny tanjon'izany dia ny hanamarina fa mihoatra ny 100 000 RMB ny karamako isan-taona sy ho antoka hiverenako aty amin'ny firenena fa tsy handika ny fe-potoan'ny “visa”-ko mba hiasàna tsy ara-dalàna. Mazava ho azy, nangataka ny rakitry ny firazanako tany amin'ny taranaka valo lasa koa izy ireo….
Ny faharoa dia tany Egipta sy ilay firenena hàlan'ny Fiombonam-be Eoropeana, Tiorkia. Moramora ihany ny an'i Egipta, nefa tsy milaza izany fa tsy nisy fepetra maro napetraka. Raha niharan'ny fanavakavahana be toa izany ity Torkia ity dia noeritreretiko fa ho azo leferina ny fanaovana visa any Tiorkia . Nefa hay ity firenen'ny Fanjakàna Ottoman taloha ity dia miavonavona izay tsy izy amin'ireo olom-pirenen'ny Repoblikan'ny Sina tahaka ireo firenen'ny Fiombonam-be Eoropeana!
eo aza izany dia aza maika ny hitsara ireo vahiny. Na i Hong Kong sy Macau antsika aza dia mitaky ny hanarahanao zotra hentitra alohan'ny hamoahany ny “visa”. Ireo antontan-taratasy sy zotra ho an'izany dia sarotra sy mandany fotoana toa ireo takian'ny olon-kafa, nefa mbola lehibe noho izany, raha vao azonao ilay izy dia voatohan'ireo avonavona sy fanararaotana ataon'ireo mpisahana mpizaha tany ianao.
Ny firenena Schengen faharoa nangatahako “visa” dia i Frantsa. Toy ny mahazatra, nitaky dika mitovy an'ireo antontan-taratasy maro izy ireo ary koa ireo porofon'ny toe-bola, dia tsy maintsy nianiana indray aho ny tsy hijanona na aiza na aiza fa hiverina ara-potoana.
Satria isika mpirahalahy anaty fahavoazana dia nahafinaritra kokoa i Vietnam, sady tsy misahirana manamarina na manana toe-bola ampy ianao na tsia no tsy manamarina ny fietezan'ny asanao; aloanao ny vola dia avy eo azo lazaina hoe afaka mandeha ianao!
Any amin'ny ranomasim-be Pasifika any Saipan, na dia tantanan'ny Etazonia aza, mahalala ireo lehibeny fa na dia marani-tsaina toa ny Sinoa aza, tsy misy mihitsy fomba ho antsika hampiasàna ny nosy ho fitaovana handehanana any an-tany Amerikana, ary noho izany dia tsotra ireo fangatahana, nefa mazava ho azy fa mbola ilaina ihany ny taratasin'asa.
Na dia eo aza ny fiarahana politika taloha, Rosia dia nanao tetika maro hanatsorana ireo zotra ho an'ireo rahalahiny taloha, fara-faharatsiny dia nazava fa isaky ny nanao izany ry zareo dia maro ireo Sinoa no tafiditra ary mijanona ao nony farany. Ny vokatr'izany fangejana sy fahalalahana izany dia ny nahatonga ireo fitakiana ho hentitra lavitra noho ny an'ny Fiombonambe Eoropeana, ary aza adino ireo taratasy ara-panjakàna sy ny porofon'ny maha-ianao anao!
Korea Avaratra tena akaikin'ny fo, izay tsy dia manisy olana loatra amin'ny porofon'ny toe-bola ho an'ireo Sinoa mpitety tany; hentitra loatra kosa ireo fikarohana mifototra amin'ny asa. Mpanao gazety, aza mieritreritra ny hiditra ao akory! Ireo masoivoho misahana ny fizahan-tany na izany aza, noho ny fikatsahany tombom-barotra, dia nahita fomba manodidina izany, amin'ny fanovàna ny filazàna asa ho ‘mpampianatra’ na ‘mpandrindra’. Ny mampalahelo dia tsy mivoaka miaraka amin'ny sarin'ny Filoha Lehibe ny “visa”, na voatomboka amin'ilay fitetiandro Gregoriana taona Juche mampiavaka ny fireneny.
Malaizia, noho ny fitadiavana fatratra ireo tovovavy Sinoa (marobe ireo mpivaro-tena any Malaizia no mavitri-piasa, izay ahitàna hatramin'ireo vehivavy Sinoa ambony toerana), dia mampidanadana ny varavarany. Mitovy amin'izany i Singapore, na dia ilaina aza ny porofon'ny taham-bola any amin'ny banky. Avoaka misaraka ireo “visa”, fa tsy amin'ny pejin'ny pasipaoronao.
Na dia nataontika anaty farango sosona aza ny minisitra vahinin-dry zareo, Yuan minisitry ny fiarovana sy mpanatanteraka, hampitoniana antsika fotsiny izany. Noho ny “lalàna Sina Iray”, sarotra lavitra noho ny an'ny firenen-kafa ny fangatahana hiditra any Taiwan. Na hatramin'ny 2004 raha mbola tsy nisokatra ofisialy ireo zava-drehetra.
Ny “visa” an'ny Taiwan no miavaka indrindra amin'ny rehetra, rakotra teny notsongaina tamin'ny Lee Teng-hui. Sady fifandraisana “ho an'ny samy firenena manokana” ireny. Soa ihany aho fa tsy miaramila, mpikambana amina Antoko politika na manam-boninahitra, ka mora ny nahazo fanekena. Nefa raha mankany Taiwan ianao dia tsy maintsy mandalo an'i Hong Kong na firenena hafa.
Ho an'ny firenena fahatelo, Filipina no nofidiako. Io irery no firenena katolika any Azia atsimo, ary na ny toe-bolako na ny asako dia tsy nohamarinina.
Mazava loatra ny fahasamihafan'i Korea Avaratra sy Atsimo. Raha nahita ny “visa”-ko Koreana Tavaratra ireo mpiasa tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Seoul dia nanontany ahy an-karisihana raha afaka maka sary izany amin'ny findainy.
Kambodza dia tsy matahotra ireo “tatitra ratsy” avy amin'ireo mpanao gazety Sinoa, ary tsy miahiahy mihitsy ny momba ireo olona Sinoa miasa na monina an-tsokosoko any. Azonao atao mihitsy aza ny hoe rehefa tonga izay vao mangataka “visa”.
Miaraka amin'ny fitondràna miaramila mahazo tsikera matetika avy amin'ny vondrom-piaraha-monina iraisam-pirenena noho ny toetry ny zon'olombelona any aminy, maro ireo zavatra itovian'i Myanmar sy Korea Avaratra: samy tsy tia mpanao gazety avy hitady ny marina izy roa.
Thailandy dia anisan'ireo firenena vitsy mora ahazoana “visa” indrindra, na dia tsy manakoronana aza ny tafika lobaka mena. Na izany aza, tsy misy antony tokony andehanako any mihitsy ankoatra ny maha-foibe fandalovana an'i Bangkok, sady avy ao ny olona avy any Yangon afaka mankany Myanmar, avy any Colombo mankany Sri Lanka, Jakarta mankany Indonesia, sy toerana maro hafa.
Tamin'ny taona 2005, tsy namoaka “visa” ho an'ny olom-pirenena Sinoa Indonezia; tsy maintsy mandoa in-jato ny sarany ara-dalàna amin'ny mpiandraikitra dia iray ny olona iray mba hikarakara ireo antontan-taratasy.
Ny nosy Afrikana Seychelles, mitovitovy amin'ny nosin'ny Ranomasim-be Indiana Maorisy, dia miavaka amin'ireo firenen-kafa rehetra noho ny fanafahany ireo mpitety tany Sinoa amin'ny fangatahana “visa”. Ity no fitomboka omena ao amin'ny fiampitàna Fidirana ny firenena. Rehefa mandalo izany nefa ny Sinoa dia henjana noho ny tokony ho izy ny fisavàna.
Noho i Afrika feno firenena maro eritreretintsika toy ny rahalahy, tsy hisy mihitsy olona miaraka amin'ny Pasipaoron'ny Olom-pirenen'ny Repoblikan'i Sina hisedra izany fanavakavahana izany. Tsia, hay simba koa any Afrika Mainty ny Nofy Fanjakazakàna! Hentitra dia hentitra i Tanzania sy Kenia nitaky ahy ny hamita ny fangatahako “visa” any amin'ireo masoivohony any Beijing izay aho vao afaka mandeha. Soa ihany fa afaka nandalo tany Uganda aho. Amin'izao fotoana izao dia afaka mitety tany manerana ny Fiombonam-be Afrikana Tatsinanana manontolo ny olona iray raha manana “visa”-n'ny iray amin'ireo firenena mpikambana ao.
Any Madagasikara, firenena taraiky indrindra maneran-tany, tonga izy ireo dia nanazava amin'ny teny Sinoa ao amin'ilay taratasy amin'ny teny Frantsay fa “ity olona ity dia tsy mahazo miasa an-tsokosoko mandritra ny fijanonany aty Madagasikara.” Any Zambia, firenena ambany fandrosoana iray hafa, dia mbola nazava kokoa izany: “Sina dia iray amin'ireo firenena enina tsy mahazo mangataka “visa” aorian'ny fahatongavany”……
Raha mila “visa” mankany Zimbabwe ianao dia tsarovy, toa ny an'i Korea Avaratra sy Myanmar, aza mamboraka mihitsy na oviana na oviana hoe mpanao gazety ianao! Matahotra adihevitra misokatra daholo ireo fitondràna jadona.
Ny “visa” amerikana no tena manahirana indrindra. Toa ny fitadiavan-kasa, voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy mankany amin'ny masoivoho ianao “hadihadiana” ary alaina dian-tànana (ireo mponin'i Beijing dia hiteny aminao fa miatrika izany koa ireo Xinjiang rehefa tonga ka mitsapa vintana ao amin'ny tsenan-damba landy Xiushui), ary raha lavina ianao dia tsy averina aminao ny 100 naloanao! Nefa tamin'izaho nohadihadiana dia tsy nisahirana nijery ny porofon'ny toe-bolako akory ry zareo!
Tamin'ny 1989, nolavina tamiko ny “visa” Kanadiana. Iza no nahalala fa farany dia ho any in-telo aho? Na izany aza dia sahirana mafy aho tamin'ny faharoa noho ny tompon'andraikitry ny “visa” iray mamerimberina mijery ny pasipaoroko sady tsy nitsahatra ny nanontany ahy, tsy misy fanazavàna, mano hoe: inona no antony nandehananao tany Iran? Na ireo firenena toa an-dry Siria, Zimbabwe, Myanmar ary Korea Avaratra? Nifandray tamina miaramila tany ve ianao? Nihaona tamin'ireo mpitarika azy ireo?
India dia mitaky tapakilana sidina miverina sy porofon'ny 10 000 RMB any amin'ny banky. Fidirana iray tsy mihoatra ny 30 andro ihany no azo. Ny tena mankarary loha dia tsy ahazoana mahatoky ny masoivoho Indiana—tena mahasosotra be io—ohatra hoe rehefa miverina any amin'ny masoivoho ianao amin'ny fotoana voatondro hakàna ny pasipaoronao, mahazo valinteny an'avona hoe “tsy mbola vonona ilay izy fa miverena rahampitso.”
Nepal no firenena tsara fanahy indrindra amin'i Sina: maimaim-poana ireo “visa” ary azo ao anatin'ny roa andro. tsy misy filaharana ao ivelan'ny masoivoho, tonga dia mandroso ianao ary mameno ireo antontan-taratasy avy hatrany. Tsy misy porofon'ny toe-bola ilaina.
Na dia afaka amin'ny fangatahana “visa” ho an'ireo firenena Schengen sy ny Fiombonam-be Eoropeana ary firenena maro hafa aza ireo mpitety tany avy amin'ireo rahalahintsika Taiwan sy Hong Kong, ireo olom-pirenen'i Sina kosa, iray amin'ireo mpikambana tranainy dimy lehibe indrindra ao amin'ny Filan-kevitry ny Fandriampahalemana ao amin'ny Firenena Mikambana, dia tsy mifaly amin'izany fomba fikarakaràna izany. Raha nitety firenena efatra aho tany Eoropa Avaratra dia tsy maintsy nitondra porofon'ny tahiry 10000 RMB fara-fahakeliny any amin'ny Bankin'i Sina, porofon'ny fananan-kasa sy ny karama isan-taona, kaodin'ny orinasa iasàko ankoatra ireo maro hafa, taratasy voasonia fanomezan-toky avy amin'ny lehibeko na ny mpitarika ahy ara-dalàna ary porofon'ny toe-bola isan-karazany, izany rehetra izany mba hangatahana “visa” tao amin'ny masoivohon'i Finlande.
130 RMB ny vidin'ny “visa” ho an'i Laos ary mivahavaha ireo fepetra.
Raha ny toe-javatra any Qatar amin'ny maha-foibe fandalovana lehibe indrindra azy any “Moyen Orient”, tsy notombohina tao amin'ny pasipaoro ny “visa” nomena ahy tany, UAE.
Iran no hany firenena mitaky ireo vehivavy hanao saron-tava rehefa mandalo ny Fidirana ny firenena, raha tsy hoe misy firenena hafa any amin'ny Helodrano manana fepetra faneriterena toa izany.
Siria, fahavalon'i Isiraely iray hafa, anton'ny tsy hahasahiako mangataka “visa” any amin'ny masoivoho Isiraeliana mandra-pahalanin'ny fe-potoana fiasàn'ity pasipaoro ity.
Somary nasiaka ihany ireo mpiasa tao amin'ny masoivoho Jordaniana any Sina, mbola mahasosotra lavitra noho ireo mpiasa Sinoa sasany any amin'ny masoivoho hafa any Sina.
Nodisoin'ny mpikarakara “visa” Mongoliana ny vanin'andro nahaterahako tamin'ny voalohany, ka raha vao tsikaritro izany dia tsy maintsy niverina tany aho ka nangataka ny mba hanitsiana izany.
Na dia nitaky ny “hanoratana marina tsara” ireo anaran'ireo ray aman-dreny 20 ka hatrany amin'ny40 taona lasa aza ny masoivoho Aostraliana ary nanadihady tsara ny mombamomba ahy rehetra, farany dia nomeny “visa” fidirana im-betsaka manan-kery mandritra ny taona iray aho. Tamin'ny fanindroany nandehanako tany dia tsy nizaka izany fombafomba mahamenatra izany intsony aho.
Na dia manamora hatrany ireo fepetra fangatahana “visa” aza i Japana, nofiratsy mbola hitohy mandritra ny taona maro ny hahafahan'ireo Sinoa hivezivezy miditra sy mivoaka ao an-kalalahana tahaka ireo rahalahintsika avy any Taiwan na Hong Kong. Ary tsy mahagaga raha mahasahy mampitsoaka mpitety tany ireo orinasa misahana ny fizahan-tàny; na ny antoka 100 000 RMB avy amin'ny orinasa tsy mahatàna ireo mpizaha tany.
Bhutan, izay tsy mbola manana fifandraisana diplomatika amin'ny Sina, dia zatra tsy mametraka “visa” ao amin'ny pasipaoro, fa hajia fotsiny rehefa mandalo ny Fidirana amin'ny firenena.
Tamin'ny fotoana nangalàko “visa” fanintelony ho an'i Nepal, efa dila efa ela ny fotoanan'ny “visa” maimai-poana.
Bangladesh dia mitaky taratasy fanasàna, ary raha tsy afaka mahazo izany dia afaka manome anao izany amin'ny vidiny ampitomboina im-betsaka ny mpikarakara fizahan-tany. Ireo mpikarakara fizahan-tany sasany dia mety hampiakatra izany vidiny izany hatramin'ny avo-efatra heny noho ny vidiny tena izy!
Manao ahoana ny dianao mitaha amin'izay rehetra izay?
Ao amin'ny teny famaranana, manoratra i Chen:
Ankehitriny dia tsy maintsy efa nahatsikaritra ny rehetra fa hita taratra amin'ny fepetra takiana amin'ny fangatahana “visa” ny toerana misy ilay firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny tanjany, ny toetrany ary ny lazany. Manantena aho fa hiasa haingana ry zareo ary hamoaka ilay horonantsary fampielezan-kevitra iny izay “hanatsara ny toetran'ny firenena Sinoa” ka mba tsy ho raisina ho fako laharana fahatelo intsony ireo zanaka mavon'i Sina (mazava ho azy fa efa nahazo ny “zom-pireneny” hafa azy manokana ireo izay manam-bola sy hery).